လီလီနိုင်ကျော်ကို စတင်စိန်ခေါ်လိုက်တဲ့ ဟန်နီထွန်း - 9style
Home/နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်များ/လီလီနိုင်ကျော်ကို စတင်စိန်ခေါ်လိုက်တဲ့ ဟန်နီထွန်း
ဒါရိုက်တာ မိုက်တီး မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲမှုနဲ့ အဖမ်းခံရပြီးနောက် တိုင်တန်းသူရှိလိူ့ ခုလို အဖမ်းခံရပါတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါသတင်းမှာ ပါဝင်နေသူတွေက အဆိုတော် လီလီနိုင်ကျော် နဲ့ သရုပ်ဆောင် ဟန်နီထွန်းတို့ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ လီလီနိုင်ကျော်ဟာ သူမရဲ့ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာကနေ ဟန်နီထွန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ချို့ကို တင်ခဲ့ပြီး သူမရဲ့ စာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဟန်နီထွန်းကတော့ live လွှင့်ကာ ပြန်လည်ချေပလာပါတယ်။
သူမ က live လွှင့်ပြီးလဲ ပြောသလို သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ စာတစ်ချို့လဲရေးခဲ့ပါတယ်။ ” သို့ လီလီနိုင်ကျော် မှားလို့ ဟန်နီထွန်း ဖေဖေ ယူလာတဲ့ဘွဲ့ကတက္ကသိုလ်ကတော့ USA Michigan state မှာရှိတဲ့ University of Michigan လို့မှတ်မိတယ် မေမေပိုသိလိမ့်မယ် မှားသွားမှာစိုးလို့မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ M.A. လို့ခေါ်တယ် ဘာသာရပ်က Literature ရသစာပေလို့ ဘာသာပြန်လို့ရတယ် ဒီပလိုမာထက်အများကြီးမြင့်တယ်။ တပ်မတော်မှာ တိုက်ရိုက် ကော်မီရှင်ရပြီး ဗိုလ်အဆင့် နဲ့ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိအဖြစ် စတင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရတာBC ရှစ်ထောင်ကျော် Very senior သိအောင်ပြောပြလိုက်တာကြွားတယ်ထင်ရင်မှားသွားမယ် နေအုံး မအားသေးလို့ ပြန်လာမယ်”
အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ ” လီလီနိုင်ကျော်တင်ထားတဲ့ ပို့စ် ကိုယ်နာမည်ပါလာလို့ တုံ့ပြန်ပါတယ်။တော်တော်လေးမအားလို့ ဒီနေ့တော့ ဒီလောက်ပါပဲ ။ဒီမိန်းမအဆင့်အတန်းလေးသိချင်ရင် သူ့ပြန်ရေးထားတဲ့ commentတွေဖတ်ကြည့်ပါ ။ ဟန်နီထွန်း စောက်ဆိုတဲ့ စကားလုံးတောင်မသုံးပါ တလောကလုံးနဲ့တယောက် အရှက်နည်းချက် အံ့သြခြင်းကြီးစွာ ….” ဆိုကာ တုန့်ပြန်ထားပါတယ်။
လက်တလောမှာတော့ လီလီနိုင်ကျော်ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်အကောင့်ဟာ အဟက်ခံထားရတယ်လို့လဲ သိရပါတယ်။ ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြမလဲဆိုတာကိုတော့ ပရိသတ်တွေနဲ့အတူ စောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့နော်။
လီလီနိုင်ကျော်ကို စဖြဲတဲ့ ဟန်နီထွန်း
ဖတ်ရူ့ပေးကြတဲ့ ချစ်ပရိသတ်ကြီး ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။
ဒါရိုကျတာ မိုကျတီး မူးယဈဆေးဝါး သုံးစှဲမှုနဲ့ အဖမျးခံရပွီးနောကျ တိုငျတနျးသူရှိလိူ့ ခုလို အဖမျးခံရပါတယျဆိုတဲ့ သတငျးတှထှေကျပျေါလာခဲ့ပါတယျ။ အဆိုပါသတငျးမှာ ပါဝငျနသေူတှကေ အဆိုတျော လီလီနိုငျကြျော နဲ့ သရုပျဆောငျ ဟနျနီထှနျးတို့ဘဲဖွဈပါတယျ။ လီလီနိုငျကြျောဟာ သူမရဲ့ဖစျေ့ဘုတျစာမကျြနှာကနေ ဟနျနီထှနျးနဲ့ပတျသကျတဲ့ အကွောငျးအရာတဈခြို့ကို တငျခဲ့ပွီး သူမရဲ့ စာတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး ဟနျနီထှနျးကတော့ live လှငျ့ကာ ပွနျလညျခပြေလာပါတယျ။
သူမ က live လှငျ့ပွီးလဲ ပွောသလို သူမရဲ့ ဖစျေ့ဘုတျမှာ စာတဈခြို့လဲရေးခဲ့ပါတယျ။ ” သို့ လီလီနိုငျကြျော မှားလို့ ဟနျနီထှနျး ဖဖေေ ယူလာတဲ့ဘှဲ့ကတက်ကသိုလျကတော့ USA Michigan state မှာရှိတဲ့ University of Michigan လို့မှတျမိတယျ မမေပေိုသိလိမျ့မယျ မှားသှားမှာစိုးလို့မဟာဝိဇ်ဇာဘှဲ့ M.A. လို့ချေါတယျ ဘာသာရပျက Literature ရသစာပလေို့ ဘာသာပွနျလို့ရတယျ ဒီပလိုမာထကျအမြားကွီးမွငျ့တယျ။ တပျမတျောမှာ တိုကျရိုကျ ကျောမီရှငျရပွီး ဗိုလျအဆငျ့ နဲ့ပွနျတမျးဝငျအရာရှိအဖွဈ စတငျတာဝနျ ထမျးဆောငျရတာBC ရှဈထောငျကြျော Very senior သိအောငျပွောပွလိုကျတာကွှားတယျထငျရငျမှားသှားမယျ နအေုံး မအားသေးလို့ ပွနျလာမယျ”
အဲ့ဒီနောကျမှာတော့ ” လီလီနိုငျကြျောတငျထားတဲ့ ပို့ဈ ကိုယျနာမညျပါလာလို့ တုံ့ပွနျပါတယျ။တျောတျောလေးမအားလို့ ဒီနတေ့ော့ ဒီလောကျပါပဲ ။ဒီမိနျးမအဆငျ့အတနျးလေးသိခငျြရငျ သူ့ပွနျရေးထားတဲ့ commentတှဖေတျကွညျ့ပါ ။ ဟနျနီထှနျး စောကျဆိုတဲ့ စကားလုံးတောငျမသုံးပါ တလောကလုံးနဲ့တယောကျ အရှကျနညျးခကျြ အံ့သွခွငျးကွီးစှာ ….” ဆိုကာ တုနျ့ပွနျထားပါတယျ။
လကျတလောမှာတော့ လီလီနိုငျကြျောရဲ့ ဖစျေ့ဘုတျအကောငျ့ဟာ အဟကျခံထားရတယျလို့လဲ သိရပါတယျ။ ဘာတှဆေကျဖွဈကွမလဲဆိုတာကိုတော့ ပရိသတျတှနေဲ့အတူ စောငျ့ကွညျ့ကွတာပေါ့နျော။
ကြည့်မိသူတိုင်း အူတက်အောင်ရီသွားရတဲ့ ယွန်းရွှေရည်ရဲ့ အခွီဗီဒီယိုဖိုင်လေး
Online မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ Shune Shune ရဲ့ ဆောင်းဦလိူင် အပိုဆုသီချင်း COVER